Okwu nke July | Netwọk Mgbasa Ozi
Monica sanchez | | Meteorology
July bụ ọnwa anyị na-ejikọkarị ọnụ na ọnwa tupu ezumike ezumike. Ma ọ bụ na na Northern Hemisphere okpomọkụ na-amalite ike, nke mere na ọtụtụ ndị na-eji oge ha n'efu ma ọ bụ na ngwụsị izu gaa n'ụsọ osimiri ma ọ bụ na-agagharị n'ugwu. Anyị ji ihe niile ụgwọ site n’ebe dị anya ụwa na-anwu site n’anyanwụ, ma n’anyanwụ n’onwe ya, nke na-adịgide n’eluigwe ruo ihe dịka elekere iri na ise ma kọwaa otu ụzọ dị nkenke nke 15º. Igwe ikuku nke anyị natara bụ nke kacha elu.
na okwu july Ha raara onwe ha nye njirimara nke ọnwa a ma ọ bụ, ihe na-abịakwute otu ihe ahụ, na oké ọkọchị, okpomọkụ na otu "abụ" ụfọdụ ụmụ ahụhụ.
1 Kedu ka July si nọ na Spain?
2 Gịnị bụ okwu nke July?
Kedu ka July si nọ na Spain?
Na Spain kwa afọ, anyị na-enwekarị ọnwa nke July ekpo ọkụ nke ukwuu, na nkezi okpomọkụ nke gburugburu 26ºC. Enwere ọtụtụ ebe edebara ụkpụrụ kachasị nke afọ ahụ, gafere 30ºC n'ọtụtụ mba, wee rute 40ºC ma ọ bụ karịa karịa ha na ndịda Andalusia na Murcia. Anomalies na-ekpo ọkụ na-adịkarị, dị ka o mere na July afọ gara aga, na anomalies nke karịrị 3ºC n'akụkụ ụfọdụ nke peninshula, dị ka Madrid ma ọ bụ Andalusia, na kwa n'àgwàetiti Gran Canaria.
Julaị 15 amalite oge canicular, nke bụ oge kachasị mma nke afọ dị ka ọnụ ọgụgụ si dị. Ọ ga-agwụ na August 15, yabụ ruo ụbọchị 30 ị ga-echedo onwe gị nke ọma na anwụ na okpomọkụ.
Banyere mmiri ozuzo, bụ ihe na-adịghị adị, na nkezi nke 20mm. Agbanyeghị, ọ na - eme oge ụfọdụ, dịka o mere na Julaị 2015, na n’obodo ụfọdụ ha nwere ike ịnụ ụtọ ọnwa dị iche iche, nwee mmiri ozuzo n’ụba. N’ezie, oge udu mmiri na-efekarị, ọkachasị n’ugwu.
Gịnị bụ okwu nke July?
Enwere ọtụtụ okwu ekwuru ma gbasasịa kemgbe ọtụtụ afọ. Ekele ha nwere anyị nwere ike ịmatakwu nke ọma ihe na-echere anyị n'ọnwa a. Ha bụ ndị a:
Na nkịtị July, ọ bụla mmiri asat: mmiri na-amịpu ngwa ngwa, ka ọ na-ezo n’oké mmiri, osimiri na-efufu.
Dika o choro ibu, n’onwa Julai a ga-enwe mmiri-ozuzo di nta: elu igwe dị ihe fọrọ nke nta ka ọ doo anya, ikuku dịkwa ọkụ.
Site na Santiago okpomọkụ ahụ ga-ekpuchi gị n'oké osimiri nke ọsụsọ: ememme Santiago Apóstol bụ Julaị 25, oge ọ na-ekpo ezigbo ọkụ.
Na Julaị bụ nnukwu tabarra, abụ nke cicada: enwere otutu umu ahụhụ na anumanu ndi ozo n’ime oge ekpomoku, ma karisia na July, na eweputa uda ha. Ndị nnọchite anya kachasị bụ cicada n'oge ehihie, na crickets n'abalị.
Olee ebe odibo na July? Ọ dị mma ọ na-esi n'olulu ahụ gaa n'olulu mmiri: na ubi mkpụrụ osisi na ubi ọtụtụ ugboro nke ogbugba mmiri ga-aba ụba. N'oge gara aga, ma ruo taa, a na-eseta mmiri site n'olulu ahụ iji mee ka ihe ọkụkụ na ahịhịa gbaa mmiri, iji na-enye anụ ụlọ mmiri na maka mmefu ezinụlọ.
Na July na-a drinkụ na ọsụsọ ... na ihe efu na anya ọhụrụ: n'ihi oke okpomọkụ, ọsụsọ ahụ mmadụ ka ọ bụrụ, mgbe ifufe na-efe ọbụna ntakịrị, ọ na-ajụ oyi; Mana n'ezie, ọsụsọ ezughi oke na July, mana anyị ga-a toụkwa nnukwu mmiri iji zere akpịrị ịkpọ nkụ, ma chọta ebe ga-ajụ oyi.
July bụ ụbọchị niile: ndị agadi na ndị na-eto eto nwere ndụ ọzọ: ụbọchị dị ogologo, ya mere a na-ahụ ndị okenye na ndị ntà na obi ike karị, na-enwekwu ọchịchọ iji oge ahụ.
July na August, nke ọ bụla dị ka nke ọzọ: ndị a bụ ọnwa abụọ meteorologically yiri nnọọ. A na-eji oke okpomọkụ mara oke ihe abụọ, ọ naghị esikwa ike zoo n'ọtụtụ mpaghara nke mba ahụ.
Oku-onwu July, akọrọ na adụ wheat: N'ihi mmiri ozuzo dị ala, ubi ọka wit na-adị nkụ n'ime ọnwa a.
Ubi-vine, na July, achọghị ị toụ mmiri, mana sunbathe: enwere ufodu nkpuru ubi, di ka ubi vaịn, ma oburu na miri zoo n'oge ya, aga emebi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ mmiri mmiri na Santiago (July 25), kụrụ ha na San Marcos (Eprel 25): nke a bụ ihe ncheta na ọnwa a ị nwere ike ịmalite ịnụ ụtọ otu n'ime ụdị mkpụrụ osisi nke oge: anyụ. 🙂
Maka Magdalena, hazelnut jupụtara: oriri nke Santa Magdalena bụ July 22, nke na-adaba na mmalite nke chara acha nke mkpụrụ hazelnut (Hazelnut corylus).
Na Julaị, mmiri na-abịa na akwa nhicha, oge ọkọchị ga-agafe: na ihe bụ, na okpomọkụ a, naanị anyị ga-emegharị ka anyị nwere ike, ma gbalịa ịnụ ụtọ ya n'ụzọ zuru oke.
You ma okwu July ọ bụla ọzọ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Okwu Julaị
Kedu ihe bụ mmemme ihu igwe dị egwu?
Ihe 5 na amaghi banyere tsunamis